Deputy Minister H.E U Htay Aung, Ministry of Hotels and Tourism, was met by Thailand Tourism authority, Vice Administrator International marketing (Asia and Pacific), Mr. SANSERN NGAORUNGSI and fellows | Tourism Latest News
← Yangon Region Hotels and Tourism Development Discussed
Ministry of Hotels and Tourism meets with investors from local and international who proposed tender for hotels →
Posted on August 10, 2012 by admin	Nay Pyi Taw, 10 Aug 2012
Deputy Minister H.E U Htay Aung, Ministry of Hotels and Tourism, was met by Thailand Tourism authority, Vice Administrator International marketing (Asia and Pacific), Mr. SANSERN NGAORUNGSI and fellows, today morning 10:00 AM at Union Minister’s guest room, office No.33, Nay Pyi Taw.
At the meeting they discussed to advertise as side by side tour destination, to promote ASEAN member’s attractive tour destinations asamain destination with ASEAN’s promotion strategy, to transfer the guests from Yunnan, China from Chiang-Mai to Yangon.
Deputy Minister H.E U Htay Aung replied that Myanmar and Thailand are not only ASEAN’s member but also neighbor country, so we want to cooperate in tourism promotion, Myanmar actively cooperate with Thailand in local organization such as ASEAN, ACMECS, GMS, CLMV etc, want to perform for tourism development through Myanmar-Thailand-China land route, and we will cooperate in further cooperation.
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင် အား ထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းအာဏာပိုင်၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရှာဖွေရေး (အာရှနှင့်တောင်ပစိဖိတ်)မှ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. SANSERN NGAORUNGSI ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှလာရောက်တွေ့ဆုံ (နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်-၁၀ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင်အား ထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းအာဏာပိုင်၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရှာဖွေရေး(အာရှနှင့်တောင်ပစိဖိတ်)မှ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. SANSERN NGAORUNGSI ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော် ရုံးအမှတ်(၃၃) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်း၍ နှစ်နိုင်ငံခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ပူးပေါင်းမြှင့်တင်ကြော်ငြာရေး၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာအတွင်းမှ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ခရီးစဉ်ဒေသများကို စုစည်း၍ ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခု အဖြစ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသား ဧည့်သည်များအား ချင်းမိုင်သို့လာရောက်ရာတွင် ချင်းမိုင်မှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆက်လက် ပို့ဆောင်ရေး ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင်မှပြန်လည်ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည်သာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သဖြင့် ခရီးစဉ်ဒေသများ ပူးပေါင်း မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီးပူးတွဲလုပ်ကိုင် လိုပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်း များဖြစ်သော (ASEAN, ACMECS, GMS, CLMV) အစရှိသော အစီအစဉ်များတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင် ငံနှင့်အတူ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်း-တရုတ်ဆက်သွယ်သည့် ကုန်းလမ်းကြောင်းမှလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်လို ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဘက်မှ လိုအပ်သည်များ ကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီး ပွင့်လင်း စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.	← Yangon Region Hotels and Tourism Development Discussed